Macluumaad | Radio Himilo | Page 113
Home / Macluumaad (page 113)
Daawo: Arday dugsi dhexe dhigata oo dagaal ku egeeyay macallinkooda
radio himilo April 28, 2016
Dalka Shiinaha waxaa qabsatay falanqeynta arrin la xiriirta in arday dugsi dhexe dhigata ay feer iyo laad kala daaleen barahoodii oo ay is qabteen mid kamid ah ardaydii fasalka dhiganeysay. Macallinka ayaa warqaddii Imtixaanka ka qaaday arday fasalka ku jiray, ...
Maroodi: Afartan daqiiqo oo uu siday dalxiisayaal dabadeed waxa uu u geeriyooday haraad
radio himilo April 27, 2016
Sambo waa Maroodi dhedig, waxa ay ku lugeysay 40 daqiiqo heer kul sareeya oo gaarsiisan 40°C iyadoo siday dalxiisayaal ugu martiyay dalkii ay ku nooleyd ee Cambodia. Cimilada oo sareysa, daal kuleyluhu watay iyo la’aanta dabeyl qaboojin kartay ayaa horseeday ...
Deeq uruuriye wadnuhu istaagay isagoo qeyb ka ahaa London Marathon
radio himilo April 26, 2016
David Seath oo ah kabtan ciidan ayaa xirtay kabaha adidas Ultra Boost ee orodka loogu talo galay si uu uga qeyb galo orodka Marathon London, isagoo uga gol lahaa in lacag uruurin uu u sameeyo ciidanka indhoolayaasha. Ninka reer Scotland ...
Wax ka ogow shaqooyinka ugu xun ee laga qabto dalka Mareekanka
radio himilo April 20, 2016
Wargeyska Time ee dalka Mareykanka ayaa daabacay ra’yi aruurin lagu soo saaray 10 shaqo ee ugu xun ee qof uu ka qabto dalka Mareykanka. Ra’yi aruurinta ayaa lagu saleeyay qiimenteeda dhinacyo badan oo laga eegayay shaqo walba oo laga qabto ...
Ninka ugu dheer adduunka oo qeyb ka jilaya Film Hollywood ah oo la soo saari doono.
radio himilo April 19, 2016
Suldaan Kosan oo ah ninka loo aqoonsanyahay inuu yahay shaqsiga ugu dheer adduunka ayaa bilaabaya inuu qeyb ka jilo film Hollywood ah oo la filayo in la soo saaro bilaha soo socda. Filmkan oo loogu magac daray “ ka mira ...
Adidas oo soo saartay kabo jeeb leh oo alaab muhiim ah aad ku xafidan karto
radio himilo April 14, 2016
Goorta jeebkaaga aanad kalsooni badan ku qabin in uu ilaalin karo wixii aad ku ridato waa welwel dhibtiisu aanay yareyn, hayeeshee caqabadaas ayaa u muuqato mid dhammaad joogta oo xal in loo helay ayay u egtahay. Shirkadda Adidas ayaa soo ...
Hooyo filaneysay inay hal cunug dhasho oo shan carruur ah mar wada dhashay
radio himilo April 4, 2016
Hooyo ayaa aaday Cusbitaal si loo baxnaaniyo oo halkaa ay ugu dhasho iyadoo oo filaneysay in cunug ay sidkii uurka ku siday. Ahsqaraar ayayse ku noqotay saacad iyo bar kaddib markii ay garowsatay inay mar qura dhashay shan caruur ah ...
qoraa caan ah oo ka maareeya qarashaadka daabacaadda sheekooyinkiisa howlo nadaafadeed
radio himilo April 3, 2016
Saqbarkii marka la xiro wadooyinka dhulka hoostiisa mara ee magaaladda Buenos Aires, Enrique Ferrari wuxuu u dhaqaajiyaa inuu hagaajiyo boosteejada kana taxadarro nadaafadeeda — si uu halkaa uga soo saaro qarashaadkii uu ku daabici lahaa buugiisa xiga. Boosteejo nadiifiyaha reer ...
Page 113 of 113« First...8090100«109110111112113
La kulan: Ninka 40 sanno ku bixiyay nooleynta keymaha la xaalufiyay!
Maxaa shaqaalaha Twitter loogu oggolaanayaa inay ka shaqeeyaan guryahooda?